Jeremaya 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
13 Nke a bụ ihe Jehova gwara m: “Gaa nweta ájị̀ ákwà linin, keekwa ya n’úkwù, ma ekwela ka mmiri ọ bụla metụ ya.”
2 M wee nweta ájị̀ dị ka Jehova kwuru wee kee ya n’úkwù.
3 Okwu Jehova wee ruo m ntị nke ugboro abụọ, sị:
4 “Were ájị̀ ahụ i nwetara, nke i kere n’úkwù, bilie gaa na Yufretis,+ zoo ya n’ebe ahụ, n’ebe gbawara agbawa na nkume dị elu.”
5 M wee gaa zoo ya n’akụkụ Yufretis, dị nnọọ ka Jehova nyere m n’iwu.
6 Ma o ruru na mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, Jehova sịrị m: “Bilie, gaa na Yufretis were ájị̀ ahụ m nyere gị iwu ka i zoo n’ebe ahụ.”
7 M wee gaa na Yufretis gwuo ala ma were ájị̀ ahụ n’ebe ahụ m zoro ya, ma, lee! ájị̀ ahụ emebiwo; ọ dịghị ihe ọ bụla a ga-eji ya eme.
8 Okwu Jehova wee ruo m ntị, sị:
9 “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Otú ahụ ka m ga-esi bibie ihe Juda ji anya isi,+ bibiekwa ihe Jeruselem ji anya isi gabiga ókè.
10 Ndị ọjọọ a, ndị na-ajụ irube isi n’okwu m,+ ndị na-eje ije dị ka isi ike nke dị n’obi ha si dị,+ na-esokwa chi ọzọ dị iche iche iji na-efe ha ofufe ma na-akpọrọ ha isiala,+ ga-adị nnọọ ka ájị̀ ahụ ọ na-adịghị ihe a ga-eji ya eme.’
11 ‘N’ihi na dị nnọọ ka ájị̀ na-araparasi mmadụ ike n’úkwù, otú ahụ ka m mere ka ụlọ Izrel dum na ụlọ Juda dum raparasie ike n’ahụ́ m,’+ ka Jehova kwuru, ‘ka ha wee ghọọ ndị m,+ ghọọkwara m aha+ na otuto na ihe mara mma; ma ha erubereghị m isi.’+
12 “Gwa ha okwu a, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru: “A na-agbaju ite ukwu ọ bụla mmanya.”’+ Ha ga-asịkwa gị, ‘Ọ̀ bụ na anyị amaghị na a na-agbaju ite ukwu ọ bụla mmanya?’
13 Ị ga-asịkwa ha, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee, m ga-eme ka ndị niile bi n’ala a na ndị eze bụ́ ndị na-anọkwasị n’ocheeze Devid+ na ndị nchụàjà na ndị amụma na ndị niile bi na Jeruselem ṅụbiga mmanya ókè.+
14 M ga-akụpịa ha, otu onye n’ahụ́ ibe ya, ma ndị bụ́ nna ma ụmụ ha n’otu mgbe,”+ ka Jehova kwuru. “Agaghị m enwe ọmịiko, agaghịkwa m enwe mwute ọ bụla, agaghịkwa m eme ebere wee ghara ịla ha n’iyi.”’+
15 “Nụrụnụ, ṅaakwanụ ntị. Unu adịla mpako,+ n’ihi na Jehova ekwuwo okwu.+
16 Nyenụ Jehova bụ́ Chineke unu otuto,+ tupu ya emee ka ọchịchịrị gbaa,+ tupu unu akpọbie ụkwụ n’ugwu mgbe chi jiri.+ Unu ga na-ele anya ìhè,+ ma ọ ga-eme ka oké ọchịchịrị gbaa;+ ọ ga-emekwa ka oké itiri gbachie.+
17 Ọ bụrụ na unu anụghị ya,+ mkpụrụ obi m ga-ebe ákwá n’ebe zoro ezo n’ihi nganga unu, bepụtakwa anya mmiri; anya mmiri ga-esikwa m n’anya na-asọdata,+ n’ihi na a dọrọwo ìgwè atụrụ+ Jehova n’agha.
18 “Gwa eze na nwunye eze,+ sị, ‘Nọrọnụ n’ebe dị ala,+ n’ihi na okpueze mara mma unu kpu n’isi ga-ada n’ala.’+
19 E mechiwo obodo ndị dị n’ebe ndịda, nke mere na ọ dịghị onye na-emeghe ha. A dọrọwo Juda dum n’agha. A dọrọwo ya n’agha kpamkpam.+
20 “Lelie anya hụ ndị si n’ebe ugwu na-abịa.+ Olee ebe ìgwè atụrụ e nyere gị nọ, bụ́ ìgwè atụrụ gị mara mma?+
21 Olee ihe ị ga-ekwu mgbe a ga-elebara gị anya,+ ebe ọ bụ na gị onwe gị akụziworo ha ihe dị ka ndị enyi ọma gị ndị nọ n’akụkụ gị ná mmalite?+ Ọ̀ bụ na ị gaghị enwe ihe mgbu, dị ka nke nwaanyị na-amụ nwa na-enwe?+
22 Mgbe ị ga-asị n’obi gị,+ ‘Gịnị mere ihe ndị a ji dakwasị m?’+ ọ bụ ọtụtụ njehie gị mere e ji yipụ gị uwe mwụda gị;+ e mesowo ikiri ụkwụ gị ihe ike.
23 “Onye Kush+ ọ̀ pụrụ ịgbanwe akpụkpọ ahụ́ ya? ka agụ owuru ọ̀ pụrụ ịgbanwe àgwà ọ tụrụ?+ Ọ bụrụ otú ahụ, unu onwe unu, bụ́ ndị a kụziiri ime ihe ọjọọ,+ nwekwara ike ime ihe ọma.
24 Ya mere, m ga-achụsasị ha+ dị ka ahịhịa ọka nke ifufe si n’ala ịkpa fesasịrị.+
25 Nke a bụ òkè gị, nke m tụrụ atụ̀ nye gị,”+ ka Jehova kwuru, “n’ihi na i chefuwo m,+ wee na-atụkwasị obi n’okwu ụgha.+
26 Mụ onwe m ga-ekpoli uwe mwụda gị wụchie gị ihu, a ga-ahụkwa ihe ihere gị,+
27 iko ị na-akwa+ na ubé ị na-ebe dị ka ịnyịnya,+ omume rụrụ arụ ị na-eme n’ịgba akwụna. Ahụwo m ihe arụ gị+ n’elu ugwu nta ndị dị n’ọhịa. Ahụhụ ga-adịrị gị, Jeruselem! Ị pụghị ịdị ọcha+—ọ̀ bụ ruo ole mgbe?”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D24%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl